आई-प्याडमा फेसटाइम डाउनलोड र स्थापना गर्न सजिलो विधि
जुन 12, 2020 द्वारा फेसटाइम गाइड एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
1 कसरी आईप्याडमा फेसटाइम प्रयोग गर्न – मा आईप्याड काम गरिरहेको छैन आईप्याड फेसटाइम लागि डाउनलोड फेसटाइम
2 को आईप्याडमा फेसटाइम:
3 परम गाइड आईप्याडमा फेसटाइम सुरु:
4 तपाईंको म प्याड मा अंकित समय विशेषता सक्रिय:
5 अंकित समय कल आईप्याडमा प्रयोग:
5.1 अनुहार समय आइकनमा क्लिक:
5.1.1 तपाईंको आवश्यक संपर्क पत्ता लगाउन:
6 सम्पर्क जानकारी प्यानल
6.0.1 चयन गरिएको सम्पर्क संग भिडियो वा अडियो कल:
कसरी आईप्याडमा फेसटाइम प्रयोग गर्न – मा आईप्याड काम गरिरहेको छैन आईप्याड फेसटाइम लागि डाउनलोड फेसटाइम
आईप्याडको लागि फेसटाइम डाउनलोड गर्नुहोस्
स्याउ सधैं आफ्नो ग्राहकहरु लागि सबै भन्दा राम्रो ल्याएको छ. ती अनुप्रयोगहरू वा सफ्टवेयर आफ्नो ग्राहकहरु गर्न आनन्द र सुविधा ल्याउन सक्छ भनेर सुरु लगातार जोड छ. सामाजिक मिडिया को प्रभाव रहँदा परिलक्षित छ.
आईप्याडका लागि फेसटाइम डाउनलोड
स्याउ आईप्याडका लागि फेसटाइम
Android iPad लागि फेसटाइम
iPad डाउनलोड लागि फेसटाइम अनुप्रयोग
हरेक उमेर को मान्छे प्रत्येक अन्य सम्बन्धित रहन चाहनुहुन्छ. यस उद्देश्यका लागि, स्याउ, खासगरी एक शानदार videotelephony अनुप्रयोग आफ्नो ग्राहकहरु लागि फेसटाइम रूपमा थाह डिजाइन.
यो अनुप्रयोग विशेष आईफोन प्रयोग गरेर सबै एप्पल प्रयोगकर्ताका लागि डिजाइन गरिएको छ, म्याक, आइपड, र iPad. एप्पल को अन्य सबै यन्त्रहरू बीच, मानिसहरू आईप्याड प्रयोग गर्न प्रेम. यसको व्यापक स्क्रिन र राम्रो गुणस्तर परिणाम अन्य उपकरणहरू तुलनामा ग्राहकहरु उल्लेखनीय यसको सुविधा र अनुप्रयोगहरू रमाइलो गर्न अनुमति.
तपाईं आफ्नो भिडियो कल को एक व्यापक दृष्टिकोण गर्न आईप्याडमा फेसटाइम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यस लेखमा गहन महत्त्व तपाईं भन्नेछु, डाउनलोड, स्थापना, उपयोग, र आईप्याडका लागि अंकित समय को सुविधाहरू.
फेसटाइम सुरुमा iPhone4 लागि बनाएको छ कि एउटा अचम्मको भिडियो र अडियो कल अनुप्रयोग हो, तर उच्च मांग साथै यो आईप्याड प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध बनाउन एप्पल compelled. आईप्याड तपाईं विभिन्न सुविधाहरू प्रदान तर सबैभन्दा आकर्षक सुविधाहरु मध्ये एक तपाईं सजिलै फेसटाइम मार्फत भिडियो वा अडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ छ.
तपाईं म्याक ओएस भएको आईप्याड छ जो अर्को प्रयोगकर्तासँग परस्पर प्राप्त गर्न अंकित समय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 10.6.6 वा पछि संस्करण. तपाईं भर्खरै व्यक्ति आफ्नो एप्पल आईडी मार्फत फेला पार्न छ. फेसटाइम मार्फत भिडियो र अडियो कल बिल्कुल मुक्त छन्. तपाईं कल प्लेस सुरु गर्न तपाईंको इन्टरनेट जडान वा सेलुलर डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
को आईप्याडमा फेसटाइम:
फेसटाइम अनुप्रयोग वास्तवमा आईफोन सहित आइओएस प्रयोगकर्ताका लागि योजना छ, iPads, आइपड, र म्याक. यो अनुप्रयोग तपाईं आफ्नो परिवार बाट टाढा हुँदा तपाईंलाई सम्पर्कमा रहन अनुमति दिन्छ, मित्र, व्यापार, र कर्मचारीहरु.
तपाईं आफ्नो आईप्याडमा यो उल्लेखनीय videotelephony अनुप्रयोग प्रयोग खोजिरहेको भने, त्यसपछि तपाईं केहि छैन चिन्ता छैन. स्याउ को फेसटाइम अनुप्रयोग पहिले नै आफ्नो iPads मा स्थापित छ.
तपाईंको iPads यो पूर्व-स्थापित फेसटाइम अनुप्रयोग सक्रिय गर्न तपाईं केवल आफ्नो एप्पल आईडी आवश्यक. तपाईंलाई थाहा लागि यो रोचक हुनुपर्छ भनेर आफ्नो आईप्याड एकपटक, तपाईं कुनै पनि बाधाहरु वा डाउनलोड को लामो प्रक्रिया बिना फेसटाइम मार्फत उच्च गुणस्तरको भिडियो वा अडियो कल गर्न तयार छन्.
iPads मा फेसटाइम को मद्दतले, तपाईं सजिलै गर्न वा असीमित भिडियो र अडियो कल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो अनुप्रयोग iOS प्रयोगकर्ताहरूलाई लागि मात्र छ रूपमा, त्यसैले तपाईं मात्र ती प्रयोगकर्ताहरू जसले आईफोन प्रयोग गर्दै भिडियो वा टेलीफोनी कल गर्न सक्नुहुन्छ, म्याक, आइपड, र iPad उपकरणहरू. तपाईं सीधा सामान्यतया सम्पर्क सूची उपलब्ध छ कि आफ्नो इमेल आईडी प्रयोग गरेर आईप्याड प्रयोगकर्ताहरूलाई एक कल गर्न सक्नुहुन्छ.
परम गाइड आईप्याडमा फेसटाइम सुरु:
आईप्याड2वा पछि तपाईं भिडियो फेसटाइम मार्फत कल सञ्चालन गर्न सुविधा एउटा मा निर्मित क्यामेरा छ. यो अन्तरक्रियात्मक अनुप्रयोग तपाईं हुँदा तिनीहरूलाई देखि टाढा आफ्नो प्रियजनलाई कुरा गर्न अनुमति दिन्छ.
अनुहार समय आईप्याड मार्फत सबै प्रमुख विशेषताहरु तर तपाईं आफ्नो अनुप्रयोगबाट यसको मात्रा समायोजन गर्न सक्दैन र पनि तपाईं आफ्नो भिडियो कल को रेकर्डिङ गर्न सक्दैन. तर अझै, यो छ कि यो प्रयोग गर्न प्रतिस्पर्धी बनाउन सबै अन्य उपयोगी सुविधाहरू प्रदान.
तपाईंको म प्याड मा अंकित समय विशेषता सक्रिय:
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तपाईंको iPads मा अंकित समय प्रयोग गर्नु अघि, तपाईं पूर्व-स्थापित अंकित समय सुविधा चालू छ कि निश्चित, तपाईं द्वारा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ:
आफ्नो आईप्याड को पृष्ठ मा उपलब्ध छ जो सेटिङ मेनुमा जानुहोस्.
त्यसपछि, यसलाई सक्रिय बारी गर्न अंकित समय सुविधा क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईंले अस्थायी रूपमा तपाईंको iPad बाट सुविधा बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईं नै प्रक्रिया पालना गर्न सक्नुहुन्छ.
आफ्नो आईप्याड को सेटिङ मेनुमा, तपाईं फेसटाइम मार्फत लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ कि सबै सम्पर्क सूची चयन गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो ई-मेल ठेगाना र फोन खाता चयन गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
अंकित समय कल आईप्याडमा प्रयोग:
तपाईं अन्य एप्पल उपकरण प्रयोगकर्ता आफ्नो फेसटाइम मार्फत कल मात्र गर्न सक्नुहुन्छ. यो जो प्रयोग गर्दै तपाईं अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग मार्फत अंकित समय interlinked प्राप्त गर्न सक्छन् हो
आईप्याड2वा पछि, वा
म्याक ओएस एक्स चलिरहेको 10.6.6 वा
iPhone4 वा पछि वा
चौथो-पुस्ता आइपड टच वा पछि
स्याउ उपकरण प्रयोगकर्ता को कुनै पनि कल अघि, बनाउन तपाईं आईप्याड सम्पर्क गर्न उहाँलाई थप्नुभयो पक्का. आफ्नो आईप्याड मार्फत एक भिडियो वा अडियो कल राख्दै awfully सजिलो छ. तपाईं बस सहित केही कदम पालना गर्न.
अनुहार समय आइकनमा क्लिक:
रूपमा पहिले छलफल, अनुहार समय आफ्नो iPads मा पूर्व-स्थापित सुविधा छ. तपाईं सजिलै संग आफ्नो iPads को घर स्क्रिनमा यसको आइकन पाउन सक्नुहुन्छ. जब तपाईं अंकित समय आइकनमा क्लिक हुनेछ, यो आवश्यक डाटा दिन तपाईं माग्छ.
तपाईं ई-मेल आईडी र फोन नम्बर तपाईं कुराकानी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ कोसँग प्रविष्ट मानिन्छ छन्. आवश्यक सम्पर्क पुगन पछि, तपाईं बस अर्को बटन क्लिक गर्न छ.
तपाईंको आवश्यक संपर्क पत्ता लगाउन:
तपाईंको फेसटाइम अनुप्रयोगको मुख्य स्क्रिनमा, तपाईं आफ्नो स्क्रीन को दाहिने पक्षमा प्रकट हुनेछ सम्पर्क सूची पाउनुहुनेछ. जब तपाईं सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ कि एक प्रयोगकर्ता को खाता पाउनुहुनेछ, बस उनको नाममा क्लिक गर्नुहोस्.
आफ्नो नाममा क्लिक गरेर, तपाईं प्रयोगकर्ता को सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्. सूची यसको घरको नम्बर देखाउँछ, मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना र साझेदारी सम्पर्क जस्तै अन्य विकल्प, मनपर्ने थप्न र यो कलर ब्लक.
सम्पर्क जानकारी प्यानल
चयन गरिएको सम्पर्क संग भिडियो वा अडियो कल:
एक पटक तपाईं विशेष प्रयोगकर्ता को जानकारी पुग्नेछ, तपाईं बस उनको नम्बर वा इमेल भण्डारण गर्न छ- ठेगाना. तपाईं मात्र अनुहार समय Inter-जोडिएको छ जो जानकारी भण्डारण गर्नुपर्छ.
आवश्यक डाटा को समिकरण पछि, तपाईं बस भिडियो वा अडियो कल को बटन मा क्लिक गर्न छ. र सबै भन्दा प्रेम भिडियो कल संसारको सेवाहरूको एक आनन्द उठाउन सक्छौं.
यसैले एतद्द्वारा जानकारी सुरु र जो आफै गर्न सजिलो कार्य हो आईप्याडमा फेसटाइम बनाउन मद्दत गर्छ. म विवरण तपाईं आफ्नो साथी र परिवारको जडान गर्न मदत आशा. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.
स्काईप बनाम फेसटाइम तुलना तुलना गर्नुहोस् 2020
Android उपकरणमा स्काइप कसरी प्रयोग गर्ने
विन्डोजको लागि फेसटाइम कसरी डाउनलोड गर्ने
कसरी पीसीमा फेसटाइम डाउनलोड र प्रयोग गर्ने
एप्पल वाचमा फेसटाइम प्रयोग गर्न सरल तरीका
Filed Under: डाउनलोड फेसटाइम
बिना जोडा आईफोन गर्न एप्पल वाच प्रयोग कसरी
डाउनलोड & कम्प्युटरमा फेसटाइम प्रयोग गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 · म्यागजिन प्रो खुल्ला उत्पत्ति फ्रेमवर्क · WordPress · लग - इन
आवश्यक सँधै सक्षम गरिएको